2 Nzukọ ụmụ Izrel dum wee malite ịtamu ntamu megide Mozis na Erọn n’ala ịkpa ahụ.+
3 Ụmụ Izrel wee na-agwa ha, sị: “A sị nnọọ na Jehova ji aka ya gbuo+ anyị n’ala Ijipt mgbe anyị nọ ọdụ n’akụkụ ite anụ,+ mgbe anyị nọ na-eriju ihe oriri afọ, n’ihi na unu akpọpụtawo anyị wee kpọta anyị n’ala ịkpa a ka ụnwụ gbuo ọgbakọ a dum.”+
4 Jehova wee gwa Mozis, sị: “Lee, m ga-eme ka ihe oriri si n’eluigwe zooro unu dị ka mmiri;+ onye ọ bụla n’ime ndị m ga-agakwa kporo nke ga-ezuru ya n’ụbọchị,+ ka m wee lee ha ule mata ma hà ga-eje ije n’iwu m ma ọ bụ na ha agaghị eje.+
5 Ọ ga-erukwa n’ụbọchị nke isii+ na ha ga-akwadebe ihe ha ga-ekpota, ọ ga-abụkwa okpukpu abụọ nke ihe ha na-ekporo kwa ụbọchị.”+
6 Mozis na Erọn wee gwa ụmụ Izrel niile, sị: “Ná mgbede, unu ga-amara na ọ bụ Jehova kpọpụtara unu n’ala Ijipt.+
7 N’ụtụtụ, unu ga-ahụ nnọọ ebube Jehova,+ n’ihi na ọ nụwo ntamu unu na-atamu megide Jehova. Gịnịkwa ka anyị bụ, mere unu ga-eji na-atamu ntamu megide anyị?”
8 Mozis wee gaa n’ihu ịsị: “Ọ ga-eme ná mgbede, mgbe Jehova ga-enye unu anụ unu ga-eri, nyejuokwa unu ihe oriri afọ n’ụtụtụ, n’ihi na Jehova anụwo ntamu unu na-atamu megide ya. Gịnịkwa ka anyị bụ? Ntamu unu na-atamu abụghị megide anyị, kama ọ bụ megide Jehova.”+
9 Mozis wee sị Erọn: “Gwa nzukọ ụmụ Izrel dum, sị, ‘Bịanụ nso n’ihu Jehova, n’ihi na ọ nụwo ntamu unu na-atamu.’”+
10 O wee ruo na ozugbo Erọn gwasịrị nzukọ ụmụ Izrel dum okwu, ha tụgharịrị chee ihu n’ala ịkpa ahụ, ma, lee, ebube Jehova pụtara ìhè n’ígwé ojii.+
11 Jehova gwakwara Mozis, sị:
12 “Anụwo m ntamu ụmụ Izrel na-atamu.+ Gwa ha, sị, ‘Ná mgbede, unu ga-eri anụ, unu ga-erijukwa ihe oriri afọ n’ụtụtụ;+ unu ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehova bụ́ Chineke unu.’”+
13 O wee ruo ná mgbede na nnụnụ kwel+ malitere ifedata wee kpuchie ebe ahụ ha mara ụlọikwuu, n’ụtụtụ ya kwa, igirigi kpuchiri ebe niile ha mara ụlọikwuu.+
14 Ka oge na-aga, igirigi ahụ kusara, ma, lee, e nwere n’ala ịkpa ahụ iberibe ihe dị imurimu imurimu,+ nke dị imurimu dị ka mkpụrụ mmiri+ n’elu ala.
15 Mgbe ụmụ Izrel hụrụ ya, ha malitere ịsị ibe ha: “Gịnị ka ọ bụ?” N’ihi na ha amaghị ihe ọ bụ. N’ihi ya, Mozis sịrị ha: “Ọ bụ achịcha Jehova nyere unu ka unu na-eri.+
16 Nke a bụ ihe Jehova nyere n’iwu, ‘Kporonụ ụfọdụ n’ime ya, onye ọ bụla dị ka ihe ọ na-eri hà. Unu ga-ekporo otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ oma+ maka onye nke ọ bụla, dabere ná mkpụrụ obi ole onye ọ bụla n’ime unu nwere n’ụlọikwuu ya.’”
17 Ụmụ Izrel wee malite ime otú ahụ; ha wee kporo ya, ụfọdụ kpooro nke dị ukwuu, ụfọdụ ekporo nke dị ntakịrị.
18 Mgbe ha tụrụ ya n’ihe ọ̀tụ̀tụ̀ oma, onye kpooro nke dị ukwuu enweghị nke mafọọrọ ya, onye kpooro nke dị ntakịrị, nke ya zukwaara ya.+ Onye ọ bụla n’ime ha kpooro dị ka ihe ọ na-eri hà.
19 Mozis wee gwa ha, sị; “Ka onye ọ bụla ghara ịhapụ nke ọ bụla n’ime ya ruo ụtụtụ.”+
20 Ma ha egeghị Mozis ntị. Mgbe ndị ụfọdụ hapụrụ ụfọdụ n’ime ya ruo ụtụtụ, ọ gbara ikpuru wee siwe ísì;+ Mozis wee weso ha iwe.+
21 Ha wee na-ekporo ya kwa ụtụtụ,+ onye nke ọ bụla dị ka ihe ọ na-eri hà. Mgbe anyanwụ chasiwere ike, ọ na-agbaze.
22 O wee ruo n’ụbọchị nke isii na ha kpooro okpukpu abụọ nke ihe oriri ha na-ekporo,+ ihe ọ̀tụ̀tụ̀ oma abụọ maka otu onye. Ndị isi niile nke nzukọ ahụ wee bịa kọọrọ Mozis.
23 O wee gwa ha, sị: “Ọ bụ ihe Jehova kwuru. Echi, a ga-edebe ụbọchị izu ike bụ́ ụbọchị izu ike dị nsọ a na-edebere Jehova.+ Gheenụ nke unu nwere ike ighe, siekwanụ nke unu nwere ike isi,+ debekwaranụ onwe unu nke ọ bụla fọrọ, dị ka ihe unu ga-edebe ruo ụtụtụ.”
24 Ha wee debe ya ruo ụtụtụ, dị nnọọ ka Mozis nyere n’iwu; o sighị ísì, ọ gbaghịkwa ikpuru.+
25 Mozis wee sị: “Rienụ ya taa, n’ihi na taa bụ ụbọchị izu ike a na-edebere Jehova.+ Taa, unu agaghị ahụ ya n’ala.
26 Ụbọchị isii ka unu ga-ekporo ya, ma ụbọchị nke asaa bụ ụbọchị izu ike.+ Ọ dịghị nke ga-adị.”
27 Otú ọ dị, o ruru n’ụbọchị nke asaa na ụfọdụ n’ime ndị Izrel pụrụ ịga kporo ya, ma ọ dịghị nke ha hụrụ.
28 Jehova wee gwa Mozis, sị: “Ruo ole mgbe ka unu ga na-ajụ idebe ntụziaka m na iwu m?+
29 Matanụ na Jehova enyewo unu ụbọchị izu ike.+ Ọ bụ ya mere o ji na-enye unu ihe oriri unu ga-eri ụbọchị abụọ n’ụbọchị nke isii. Onye ọ bụla nọrọ n’ụlọ ya.+ Ka onye ọ bụla ghara isi n’ebe o bi pụọ n’ụbọchị nke asaa.”
30 Ụmụ Izrel wee debe ụbọchị izu ike n’ụbọchị nke asaa.+
31 Ụlọ Izrel wee malite ịkpọ ya “mana.” Ọ na-acha ọcha dị ka mkpụrụ kọrịanda, ọ na-atọkwa ka achịcha dị mbadamba e tinyere mmanụ aṅụ.+
32 Mozis wee sị: “Nke a bụ ihe Jehova nyere n’iwu, ‘Kpojuo ya otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ oma ka ọ bụrụ ihe a ga-edebe ruo ọgbọ niile unu,+ ka ha wee hụ ihe oriri m mere ka unu rie n’ala ịkpa mgbe m nọ na-akpọpụta unu n’ala Ijipt.’”+
33 Mozis wee sị Erọn: “Were otu ite wụnye mana juru otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ oma n’ime ya ma debe ya n’ihu Jehova dị ka ihe a ga-edebe ruo ọgbọ unu niile.”+
34 Dị nnọọ ka Jehova nyere Mozis n’iwu, Erọn debere ya n’Ihe Àmà+ ahụ ka ọ bụrụ ihe a ga-edebe edebe.
35 Ụmụ Izrel wee rie mana ruo afọ iri anọ,+ ruo mgbe ha batara n’ala ndị mmadụ bi.+ Ọ bụ mana ka ha riri ruo mgbe ha bịarutere n’ókè nke ala Kenan.+
36 Otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ oma bụ otu ụzọ n’ụzọ iri nke otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ efa.
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D2%26Chapter%3D16%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl